Bangladesh side – democracy for burma
Category: Bangladesh side
!! #ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်မှ #ထွက်ခွာလာသော #ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများ ပါသည့်
On May 22, 2015 May 22, 2015 By Burma Myanmar newsIn Bangladesh side, BOAT PEOPLE, Burma, government, MYANMARLeaveacomment
ဘီဘီစီ( မြန်မာ) သတင်းမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ သတင်းထဲမှာ ပါတဲ့ လှေပေါ် ပါတဲ့ လူနှစ်ရာဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနုိုင်ငံက လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ လူမှောင်ခိုလှေ ဘယ်နေ့ မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ထွက်တယ်၊ ဘယ်နေ့မှာ ထုိုင်းကမ်းခြေက နေပြန်လှည့်လာတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေ တစ်ခုမှမရေးပဲနဲ့ ရခုိုင်ပြည်နယ်က ထွက်လာသလိုလို လှည့်ပတ်ရေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သတင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလာပါတယ်လို့ အတိအကျ ရက်စွဲ၊နေရာများနဲ့ ရေးထား တာတောင် xx မြန်မာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတော့ စက်လှေပေါ် ပါသူအများစုဟာ ဘင်္ဂါလီတွေဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေကို ဘင်္ဂါလီတွေလို့သာ သုံးနှုန်းခေါ်ဆိုလေ့ရှိပါတယ်xxxဆိုပြီး မလိမ့်တပတ်ရေးထား ပါသေးတယ်။
ဒီလို ရေးသားချက်မျိုးကို အင်တာနက်ပေါ်မှာရော၊ ပုံနှိပ်စာမျက်နှာများမှာရော ၀ိုင်းဝန်း တုန့်ပြန် ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဘီဘီစီမှာ ၀င်လုပ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းက မီဒီယာ ဆရာကြီးတွေရော မကန့်ကွက်တော့ဘူးလား မသိပါ။
မြန်မာပြည်ကို ချစ်ကြသူတိုင်း စိုးရိမ်နေကြသည် ။ စိုးရိမ်ရလောက်အောင် တိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားပြီး မိသားစု ချမ်းသာဖို့လုပ်ခဲ့သူတွေ သန်းချီပြီး ချမ်းသာနေကြတာ အခုထိ အရေးမယူရဲကြသေးဖူးလေ ။ * This clearly show “Boat People are not Myanmar”, strong evidence* ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်မှ ထွက်ခွာလာသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများ ပါသည့် စက်လှေတစ်စီးနှင့် အခြားစက်လှေတစ်စီးအား မြန်မာ့ရေပိုင်နက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိ ဓာတ်ပုံများ (Source- MOI Webportal Myanmar) မေလ(၂၁)ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် မောင်တောမြို့နယ်၊ သင်္ဘောကွေ့ကျေးရွာ အနောက်ဘက် ရေမိုင်(၄)မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်၌ တပ်မတော်စစ်ရေယာဉ်အမှတ်(၅၆၈)မှ နယ်မြေလုံခြုံရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဘင်္ဂလီလူမျိုး(၂၀၀)ခန့် တင်ဆောင်လာသော စက်လှေ တစ်စီးနှင့် လူလိုက်ပါခြင်းမရှိသော စက်လှေတစ်စီးတို့ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ လူများတင်ဆောင်လာသော စက်လှေ – အလျား(၈၀)ပေ၊ အနံ(၂၀ . ၅) ပေ၊ ရေစူး (၆)ပေ၊ အင်ဂျင် (EK-100) မြင်းကောင်ရေ (၁၅၀)တပ် တံကေးစက်လှေဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့နေ အုမင့် ဆိုသူဖြစ်၊ – ရနောင်းမြို့မှ ဧပြီလ (၈)ရက်နေ့တွင် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ရေပိုင်နက်ကို ဧပြီလ(၁၃) ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိ၊ – ဧပြီလ(၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ရေပိုင် နက် အုန်းကျွန်း အနောက်ဘက် (၄)မိုင်ခန့်အကွာတွင် ရပ်တန့်ထား ခဲ့၊ – ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများမှ လှေငယ်များဖြင့် စက်လှေသို့ အဖွဲ့လိုက် ရောက်ရှိခဲ့၊ အုန်းကျွန်းမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက် ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား တို့တွင် ပင်လယ်ပြင် စစ်ဆေးမှုများ ရှိနေသဖြင့် မေလ(၁၅)ရက်နေ့တွင် နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့် မောင်းနှင်လာစဉ် မြန်မာ့ ရေပိုင်နက်သို့ ရောက်ရှိပြီး ယခုကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်။ – ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား (၂၀၈)ဦး (အသက် ၁၄ နှစ်ခန့် ၁၀ ဦးခန့်နှင့် ကျန်လူများမှာ အသက် ၃၀နှင့် ၄၀ ကြားဖြစ်) – ၎င်းတို့မှာ ကော့ဘဇား၊ စစ်တကောင်း၊ ဒါကာမြောက်ခြမ်းတွင် နေထိုင်သူ များ ဖြစ်ကြောင်း၊ လှေသမား(၉)ဦးနှင့် စကားပြန် ဘင်္ဂလီ (၂)ဦး ပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်း (၂၁၉)ဦး ပါဝင်ကြောင်း၊ ကျန်စက်လှေ – ဘင်္ဂလီ (၁)ဦး၊ လှေသမား(၈)ဦး ပါရှိပြီး အလျား(၆၈)ပေ၊ အနံ(၁၆ .၉) ပေ၊ ရေစူး(၅)ပေ အင်ဂျင် (TWK-6) ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်မှာ မြိတ်မြို့မှ ကိုခိုင် ဆိုသူဖြစ်၊ – ၎င်းစက်လှေမှာ အထက်ပါ ထိုင်းလူမျိုး အုမင့် ပိုင်သော စက်လှေသို့ ရိက္ခာ လိုက်ပို့ခြင်းဖြစ်၊ – မေလ(၄)ရက်နေ့တွင် ကော့သောင်းမှ ထွက်ခွာခဲ့ ရာ မေလ(၁၂)ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ရေပိုင်နက် သို့ ရောက် ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်။ ဘင်္ဂလီအရေးက အမျိုးသားရေး ကျူးကျော် အရေး ဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်က လူတွေ ဆွေးနွေးဖို့နားမလည်သေးဖူး ။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး လာပြောတာနဲ့ဘင်္ဂလီ ၂၀၀ ပါတဲ့ လှေကို ကမ်းကပ်ခွင့်ပေး နေစရာပေး ။ ဝတ်စရာတွေပေး လိုက်ပြီ ။ ရခိုင်စကားသင်မယ် မြန်မာစကားသင်မယ် ငွေစုမယ် ။ အကျင့်ပျက် လာပ်စားဝန်ထမ်းတွေနဲ့မှတ်ပုံတင်လုပ်မယ် ။ ဘယ်လူကြီး သမီး လဲတော့ မသိဖူး ။ ရေချိုး ထားခိုင်းတော့ ။ ကျူးကျော် ထုတ်ဖေါ် ပြန်ပို့ ရေးကို အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ အသွင်ဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်း အနေနဲ့တတိုင်းပြည်လုံး လုပ်နိုင်ရင်တော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပြောခဲ့တဲ့ တတိယ နိုင်ငံတွေ ပို့ ဖို့ဒီ ၂၀၀ နဲ့အစ ပြုရမှာပါ ။ အဖျားမရှုးဖို့ တော့လိုတယ် ။